Izinto zemvelo zezimboni
Amavithamini nama-Amino acid
I-Labeyond Chemicals Co, Ltd. ingumhlinzeki osuselwa eChina nomlingani owenziwe ngezifiso wama-API nama-intermediates, Izithako Zokuzigcoba Ezisebenzayo, amavithamini namakhemikhali ezimboni, njll.
Ekuqaleni uLabeyond ubelokhu ehlinzeka izithako nabalimi kumakhasimende ethu eNdiya, Ibhizinisi lakhula futhi amakhasimende abheka ukuthenga imikhiqizo ethe xaxa futhi ehlukahlukene kithina, futhi abheka uLabeyond njengomlingani ozobheka eChina. Ngokuhamba kwesikhathi, ibhizinisi lethu lanwetshwa laya nakwamanye amazwe noma ezimakethe ezifana ne-USA, Mexico, Brazil, Europe ne-Afrika.
I-Labeyond inobudlelwano bokuphakelwa okuhlala isikhathi eside nabakhiqizi abahamba phambili abangaphezu kuka-50 eChina, futhi yasungula izindawo zokukhiqiza ezi-3 e-Jiangsu, Zhejiang naseSichuan, eChina.
OKUNYE YEKA UKUXHUMANISWA OKUHLANGANISIWE
I-Labeyond inikeza ukuhlinzekwa kwamakhemikhali okuhlangene okukodwa, ukonga umsebenzi ophindwe kabili nezindleko zemigomo yethu. Sisebenza ukungeza inani kumakhasimende ngakolunye uhlangothi.
Sikholelwa ukuthi ikhwalithi iyikho konke. Yisici esisodwa esibaluleke kakhulu kuzo zonke izinqumo zethu, kusuka kumiphi imithombo esiyithengayo, ukuthi sikuletha kanjani kuwe.
UKUDLALISWA NGESIKHATHI KUKHULU!
Ukulethwa ngesikhathi kuhlala kukukhathazeka okuyinhloko ngasohlangothini lwethu.Sisebenza nabasebenzi abanobungcweti bokusebenza, futhi abasebenzi bethu amahora angama-24 bebukele okuqhubekayo.
IKHEMIKHALI KUFANELE IHLONISHWE
Siyayihlonipha iChemistry, ngalokho esikuthandayo. Ubuningi babasebenzi bethu yimvelaphi ehlobene neChemistry. Sisebenza ngokujulile embonini yamakhemikhali ukuze sihlangabezane nezidingo zakho.
Incwadi Yezindaba Zamabhizinisi
RM1317 Zhongnan Bldg. A, No. 18 Zhonghua West Road, Ganjingzi Dist. I-Dalian-116031, Isifundazwe saseLiaoning, eChina
Sishayele manje: + 86- (411) -86505955
Imibuzo mayelana nemikhiqizo yethu noma pricelist, sicela ushiye umyalezo wakho futhi sizoxhumana nawe kungakapheli amahora angu-24.
Thumela Uphenyo Lapha!